” မာယာများတဲ့ မိန်းကလေး”ကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ . . . – သတင်းစုံ
” မာယာများတဲ့ မိန်းကလေး”ကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ . . .
ယနေ့ မိမိတို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် သာသနာထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ မြို့နယ်ထဲ လှည့်လည်ကြစဉ် ရတနာပုံဈေးရှေ့ နားနေခုံပေါ်မှာ လဲလျောင်းအိပ်စက်နေတဲ့ သီလရှင်ဝတ် မိန်းကလေးတစ်ယောက် တွေ့ရှိကြလို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး စစ်ဆေးဖြစ်ကြပါတယ်။
သီလရှင်ဝတ်မှ မိန်းကလေးမှ- ” မြို့ဟောင်းဘူတာဘေးရှိ ဓမ္မာပေါ်မှာ အဒေါ်ဖြစ်သူ သီလရှင်နှင့် အတူနေကြကြောင်း၊
တစ်ရက်(၂၀၀၀ဝိ)ကျပ်ရမှ ပြန်ရကြောင်း၊ အဒေါ်ဖြစ်သူမှ ကျောင်းဆောက်လို၍ အလှူခံခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း” စသဖြင့် ပြောဆိုလာပါသည်။
ဒါကြောင့်မို့ အဆိုပါ သီလရှင်ကို သာ/ထိန်းဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ခေါ်ဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ကို လျှောက်ထားကာ မြို့ဟောင်းဘူတာအထိ ကြွရောက်ကြပါသည်။
မြို့ဟောင်းဘူတာရောက်တော့ သီလရှင်ဝတ် မိန်းကလေးပြောတာ တစ်ခုမှ မှန်ကန်မှု မရှိပါ၊ အသေအချာ စစ်ဆေးပါမှ ဘူတာကြီးမှာ အခြေချကြောင်း သိရလို့ ဘူတာကြီးသို့ ကြွရောက်ကြပြီး သီလရှင်ဝတ်မိန်းကလေး ညွှန်ပြသည့် အမျိုးသမီးကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဆိုပါ အမျိုးသမီးမှ-
” သီလရှင်ဝတ်မိန်းကလေးဟာ ဘယ်ရပ်ဘယ်ဒေသကမှန်း မသိရကြောင်း၊ ဘူတာသံလမ်းပလက်ဖောင်းဘေးမှာ တစ်ယောက်ထဲ အိပ်နေတာ တွေ့နေရလို့ မသမာလူတွေနှင့် တွေ့ကြုံသွားလျှင် ဒုက္ခရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်ရလို့ သနားပြီး ခေါ်ဆောင်ကာ သူတို့နှင့်အတူ အိပ်စက်ခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ထားလာပါသည်။
ဘူတာတာဝန်ရှိ ပာဂ္ဂိုလ်များမှလည်း ” ဒီသီလရှင်ဝတ်မိန်းကလေး ဘူတာမှာ တွေ့မြင်နေရတာ သုံးရက်ခန့်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နေပြည်တော်ဘက်မှ လာသည်ဟု ယူဆရကြောင်း လျှောက်ထားလာလို့ အဆိုပါ သီလရှင်ဝတ် မိန်းကလေးကို သီလရှင်ဝတ်လဲစေကာ ဆုံးမပြီး နေပြည်တော်သို့ ထွက်ခွာမည့် ရထားဖြင့် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
( စစ်ဆေးမေးမြန်းကတည်းက စကားပြောရာမှာ ယဉ်ကျေးစွာ သီလရှင်စကား အသုံးအနှုံးမတတ်ကြောင်း သိရှိခဲ့စဉ်ကတည်းက သီလရှင်အတုမှန်း သိသာပါသည်)
သာသနာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။
Credit – apannpyay
ယနေ့ မိမိတို့ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ သာသနာထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့ မွို့နယျထဲ လှညျ့လညျကွစဉျ ရတနာပုံစြေးရှေ့ နားနခေုံပျေါမှာ လဲလြောငျးအိပျစကျနတေဲ့ သီလရှငျဝတျ မိနျးကလေးတဈယောကျ တှရှေိ့ကွလို့ ချေါဆောငျပွီး စဈဆေးဖွဈကွပါတယျ။
သီလရှငျဝတျမှ မိနျးကလေးမှ- ” မွို့ဟောငျးဘူတာဘေးရှိ ဓမ်မာပျေါမှာ အဒျေါဖွဈသူ သီလရှငျနှငျ့ အတူနကွေကွောငျး၊
တဈရကျ(၂၀၀၀ဝိ)ကပျြရမှ ပွနျရကွောငျး၊ အဒျေါဖွဈသူမှ ကြောငျးဆောကျလို၍ အလှူခံခိုငျးခွငျးဖွဈကွောငျး” စသဖွငျ့ ပွောဆိုလာပါသညျ။
ဒါကွောငျ့မို့ အဆိုပါ သီလရှငျကို သာ/ထိနျးဥက်ကဋ်ဌဆရာတျောကိုယျတိုငျ ချေါဆောငျပွီး သကျဆိုငျရာ မွို့နယျသံဃနာယကအဖှဲ့ကို လြှောကျထားကာ မွို့ဟောငျးဘူတာအထိ ကွှရောကျကွပါသညျ။
မွို့ဟောငျးဘူတာရောကျတော့ သီလရှငျဝတျ မိနျးကလေးပွောတာ တဈခုမှ မှနျကနျမှု မရှိပါ၊ အသအေခြာ စဈဆေးပါမှ ဘူတာကွီးမှာ အခွခေကြွောငျး သိရလို့ ဘူတာကွီးသို့ ကွှရောကျကွပွီး သီလရှငျဝတျမိနျးကလေး ညှနျပွသညျ့ အမြိုးသမီးကို စဈဆေးတဲ့အခါ အဆိုပါ အမြိုးသမီးမှ-
” သီလရှငျဝတျမိနျးကလေးဟာ ဘယျရပျဘယျဒသေကမှနျး မသိရကွောငျး၊ ဘူတာသံလမျးပလကျဖောငျးဘေးမှာ တဈယောကျထဲ အိပျနတော တှနေ့ရေလို့ မသမာလူတှနှေငျ့ တှကွေုံ့သှားလြှငျ ဒုက်ခရောကျသှားမှာ စိုးရိမျရလို့ သနားပွီး ချေါဆောငျကာ သူတို့နှငျ့အတူ အိပျစကျခိုငျးတာဖွဈကွောငျး လြှောကျထားလာပါသညျ။
ဘူတာတာဝနျရှိ ပာဂ်ဂိုလျမြားမှလညျး ” ဒီသီလရှငျဝတျမိနျးကလေး ဘူတာမှာ တှမွေ့ငျနရေတာ သုံးရကျခနျ့ရှိပွီးဖွဈကွောငျး၊ နပွေညျတျောဘကျမှ လာသညျဟု ယူဆရကွောငျး လြှောကျထားလာလို့ အဆိုပါ သီလရှငျဝတျ မိနျးကလေးကို သီလရှငျဝတျလဲစကော ဆုံးမပွီး နပွေညျတျောသို့ ထှကျခှာမညျ့ ရထားဖွငျ့ ပွနျလညျတငျပေးလိုကျပါသညျ။
( စဈဆေးမေးမွနျးကတညျးက စကားပွောရာမှာ ယဉျကြေးစှာ သီလရှငျစကား အသုံးအနှုံးမတတျကွောငျး သိရှိခဲ့စဉျကတညျးက သီလရှငျအတုမှနျး သိသာပါသညျ)
သာသနာထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေးအဖှဲ့၊ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ၊ မန်တလေး။
Previous Previous post: ဆင်တုပ်ကွေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် အချက်များ
Next Next post: ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိသော မြန်​မာနို​ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသီလရှင်​စာသင်​တိုက်